कप्तान सन्दीप नायक, सिंगापुरमाथि नेपालको संघर्षपूर्ण जीत | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-06-19T20:30:14.907505+05:45
कप्तान सन्दीप नायक, सिंगापुरमाथि नेपालको संघर्षपूर्ण जीत
काठमाडौँ – आईसीसी एसिया यू–१९ विश्वकप छनोटमा नेपालले सिंगापुरमाथि ४ विकेटको संघर्षपूर्ण जीत निकाल्दै विजयी शुरुवात गरेको छ । सिंगापुरले प्रस्तुत गरेको ७४ रनको झिनो स्कोर पछ्याउन नेपाललाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।
सिंगारपुर क्रिकेट क्लबमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले टस जितेर घरेलु टोलीलाई ब्याटिङको निम्ता दिएको थियो । नेपाली बलरहरुको उत्कृष्ट बलिङ अगाडी सिंगापुरका ब्याटस्म्यानहरु निरिह देखिएका थिए ।
पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले २९ ओभरमा अलआउट हुँदै ७३ रन मात्र बनाउन सक्यो । कुनै बेला २६ रनको स्थितिमा ७ विकेट गुमाइसकेको सिंगापुरका लागि पुछारका ब्याटस्म्यान ब्रिगु ऐयरले ४२ रन बनाएपछि स्कोर सम्मानजनक देखिएको थियो ।
नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले ५ विकेट लिँदै सिंगापुरको ब्याटिङक्रमलाई ध्वस्त बनाएका थिए । उनले ८ ओभर बलिङ गर्दै मात्र २१ रन खर्चे । त्यस्तै शहाब आलमले ३ तथा किशोर महतोले दुई विकेट लिए ।
झिनो लक्ष्य पाएको नेपालको पनि शुरुवात राम्रो हुन सकेन मात्र ९ रनको स्कोरमा नेपालले दुवै ओपनारलाई गुमाउन पुग्यो । त्यसलगतै दिपेन्द्रसिंह ऐरलाई २ रनमा गुमाएपछि नेपाल दबाबमा आएको थियो । तर, प्रनित थापा मगरले २३ तथा अनिल साहले २३ र १९ रन बनाएपछि नेपालको पारी सम्हालिएको थियो । दुवै आउट भएपछि रोहित कुमारले ११ तथा पवन शर्राफले ४ रन बनाएर नटआउट रहँदै नेपाललाई जित दिलाए । नेपालले मात्र १७.३ ओभरमा सिंगापुरको लक्ष्य भेटाएको थियो ।
सोमबारको अर्को खेलमा अफगानिस्तानले पनि विजयी सुरुआत लियो । मलेसियालाई आठ विकेटले हराउँदै बलियो मानिएको अफगानिस्तान विजयी भएको हो । पहिलो ब्याटिङ गरेको मलेसियाले प्रस्तुत गरेको ५३ रनको लक्ष्य अफगानिस्तानले ५.५ ओभर मात्र दुई विकेटको क्षतिमा पछ्यायो ।
राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा प्रतियोगिताको विजेता अर्को वर्ष न्युजिल्यान्डमा हुने आर्यसीसी यू–१९ विश्वकपमा छनोट हुनेछ ।
रोनाल्डोको व्यवहारदेखि रियल दुःखी
मेस्सी र रोनाल्डोभन्दा पनि नेयमार मूल्यवान
रोनाल्डोले चुने पोर्चुगलमा आफ्नो उत्तराधिकारी
छोरीलाई ओठमा चुम्बन गर्दै डेविड बेकहमले सेयर गरे तस्बिर, विवादमा घेरिए
मेस्सीले बाल्यकालकी प्रेमिका र दुई सन्तानकी आमासँग भोली विवाह गर्दै
मैदानमा खेल्दा खेल्दै किन मृत्यु हुन्छ ‘अश्वेत’ खेलाडीको ?
बेइजिङ पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ?
अमेरिका र उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता
सकारात्मक समाचारलाई प्राथमिकतामा राख्न मुख्यमन्त्रीको सुझाव
नयाँ कानूनमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता छः मन्त्री तामाङ
कोलम्बियामाथि जापानको जित, जापान २–१ ले अगाडि
जापानले गर्यो दोस्रो गोल, कोलम्बिया झनै दबाबमा
भिएलएनका सञ्चालक श्रेष्ठ १२ लाख धरौटीमा रिहा
गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीले पाए सफाइ
बजेटमा विपक्षी प्रदेशसभा सदस्यको असहमति